Muujinta isleeg ka 16 ilaa 18 Bogga 4 - Fadlan U Gudub Dhamaadka Si Aad U Aragto Natiijooyin Badan
2H2O + HCHO + 2 [Ag (NH3)2] OH → 2 Ag + 3NH4OH + HCOONH4
biyaha lacag ammonium hydroxide Foomka amooniyamka; Foomka Amooniyam; Cusbada 'ammonium cusbada'
2 1 2 2 3 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2H2O + HCHO + 2 [Ag (NH3)2]OH → 2Ag + 3NH4OH + HCOONH4
Waa maxay xaalada falcelinta ee H2O (biyaha) ay kaga falceliyaan HCHO () ula falgalaan [Ag(NH3)2]OH ()?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Ag (silver) iyo NH4OH (ammonium hydroxide) iyo HCOONH4 (Formic acid ammonium; Ammonium formate; Formic acid ammonium salt)?
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan HCHO () waxay ula falgalaan [Ag(NH3)2]OH ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2H2O + HCHO + 2 [Ag (NH3)2]OH → 2Ag + 3NH4OH + HCOONH4
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NH4OH ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NH4OH (ammonium hydroxide) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee HCOONH4 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh HCOONH4 (Formic acid ammonium; Ammonium formate; Formic acid ammonium salt) alaab ahaan?
2AgNO3 + HCHO + 3NH4OH → 2 Ag + 2H2O + 2NH4MAYA3 + HCOONH4
amooniyam qalin ammonium hydroxide lacag biyaha amooniyam amooniyam Foomka amooniyamka; Foomka Amooniyam; Cusbada 'ammonium cusbada'
2 1 3 2 2 2 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2AgNO3 + HCHO + 3NH4OH → 2Ag + 2H2O + 2NH4MAYA3 + HCOONH4
Waa maxay xaalada falcelinta ee AgNO3 (taxadiga lacagta ah) ee HCHO () kaga falcelisa NH4OH (ammonium hydroxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Ag (silver) iyo H2O (biyaha) iyo NH4NO3 (ammonium nitrate) iyo HCOONH4 (Formic acid ammonium; Ammonium formate; Formic acid ammonium salt)?
Dhacdo ka dib AgNO3 (nitrate Silver) waxay la falgashaa HCHO () waxay la falgashaa NH4OH (ammonium hydroxide)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2AgNO3 + HCHO + 3NH4OH → 2Ag + 2H2O + 2NH4MAYA3 + HCOONH4
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Ag (ammonium hydroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ag (silver) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NH4NO3 (ammonium hydroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NH4NO3 (ammonium nitrate) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee HCOONH4 (ammonium hydroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh HCOONH4 (Formic acid ammonium; Ammonium formate; Formic acid ammonium salt) alaab ahaan?
3HCHO + 11 KOH + 2HAuCl4 → 2aad + 8H2O + 8KCl + 3HADH
potassium hydroxide Chloroauric acid dahab biyaha chloride potassium Kaniisadda loo yaqaan 'formic acid potassium'; Foomka kaalshiyamka ah; Cusbada ku jirta maadada loo yaqaan 'formic acid acid'
3 11 2 2 8 8 3 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 3HCHO + 11 KOH + 2HAuCl4 → 2Au + 8H2O + 8KCl + 3HADH
Waa maxay xaalada falcelinta ee HCHO () ay kula falgasho KOH
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Au (dahab) iyo H2O (biyaha) iyo KCl (potassium chloride) iyo HCOOK (Formic acid potassium; Potassium formate; Formic acid potassium salt)?
Dhacdada ka dib HCHO () waxay la falgashaa KOH (potassium hydroxide) waxay la falgashaa HAuCl4 (Chloroauric acid)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda HAuCl4 (Chloroauric acid), waa la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 3HCHO + 11 KOH + 2HAuCl4 → 2Au + 8H2O + 8KCl + 3HADH
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta HAuCl4 (Chloroauric acid)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee HAuCl4 (Chloroauric acid)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh HAuCl4 (Chloroauric acid) falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Au (dahab)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Au (Chloroauric acid)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Au (dahab) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jidheed ee H2O (Chloroauric acid)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee KCl (Chloroauric acid)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh KCl (potassium chloride) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee HCOOK (Chloroauric acid)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh HCOOK (Formic acid potassium, formate Potassium; Formic acid potassium salt)
Muujinta isleeg ka 16 ilaa 18 Page 4